Onye na -emepụta ihe nkiri na onye na -ebubata ngwongwo CCMIE
Onye na -adọkpụ akpa ihe nkiri
Max. ikike ibuli elu: 37000kg
Ọnụ ọgụgụ dị arọ ： 14500kg
Nnukwu onye na -ebuli akụkụ ： 7250kg
Oke mkpokọta kachasị bụ ： 40000kg
Ndepụta akụkụ nke ọkara trailer (L × W × H): 14100 × 2500 × 4000mm
Ndepụta akụkụ nke akụkụ lifter (L × W × H): 1020 × 2500 × 2490mm
Model Engine ： Kubota 2403-M-DI-E3B-CSL-1 (Nhọrọ, ọ bụrụ na melite ihe nlereanya ahụ, anyị ga-agwa gị mgbe ị na-enye iwu)
Trailer Container Trailer na -eburu ibu na -ebutu ihe na -ebupute arịa site na kranụ abụọ nwere hydraulic nke etinyere na nsọtụ ọ bụla nke ụgbọ ala 40ft. Ezubere ụgbọ ala nke na -eburu onwe ya ka ọ na -ebulite arịa site na ala, site na ụgbọala na -adọkpụ ndị ọzọ site n'ụgbọ ala site na ebuka na -agbagharị, site n'ụgbọ okporo ígwè site na mkpọkọ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ruo na ụgbọala na -adọkpụ, gaa n'ala ọzọ, ruo n'ọkwa ọzọ. Trailer Container Trailer S n'onwe nwere ike ịnye nnyefe akpa 20ft na 40ft. A na -akwalite ihe na -adọkpụ ụgbọala nke ihe eji adọkpụ ihe eji ebu ihe, nke ibu ya dị tọn iri asatọ.
Companylọ ọrụ anyị na-ekwusi ike na '' ịdị elu dị elu, nnyefe oge, ọnụ ahịa ọkacha mmasị '', ugbu a, anyị emebela mmekọrịta ọnụ ogologo oge na ndị ahịa China na ndị ahịa si mba ofesi, wee nye ndị na-emepụta ihe mbuli elu na-ebubata ihe na-ebubata ihe. ndị ahịa ochie. Trailer Container Conloader, ụlọ ọrụ anyị na -agba mbọ mgbe niile ka “onye ahịa buru ụzọ” ma na -agba mbọ inyere ndị na -azụ ahịa aka ịgbasa òtù ha wee hapụ ha ka ha bụrụ nnukwu ndị isi!
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-enye traktị ndị na-ebubata akpa China na trailers n'akụkụ. Anyị na -achọsi ike ịkwado ụlọ ọrụ si mba ọzọ na -elekwasị anya n'ịdị mma, ọkọnọ kwụsiri ike, ike siri ike na ezigbo ọrụ. Anyị nwere ike ịnye ọnụahịa kacha asọmpi na ịdị mma dị elu n'ihi na anyị enwetala ahụmịhe karịa. Ị nabatara ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla.
Teknụzụ mara mma nke na -ebuli ngwaọrụ mkpọchi mkpọchi agbụ maka itinye na ibudata akpa
Usoro mkpọchi agbụ agbụ agbụ maka ibupute na ibudata ihe, mkpọchi mkpọchi a na -atụgharị na akpaghị aka wee kpọchie ya na akpa mgbe a na -arụ ọrụ, agaghị ada, wee hụ na nchekwa dị n'oge ọrụ; n'oge njem, a ka nwere ike kpọchie mkpọchi agbagọ na -akpaghị aka site na ngwaọrụ amachiri, a na -ewepụ nrụgharị nke nchịkọta ụgbọ njem na onye na -ebutu ya, yana nchekwa ka a na -akwalitekwa nke ọma. Mgbe arụchara ọrụ ahụ, enwere ike nweta eriri eriri na usoro mgbake kreenụ site n'ịkwalite ọnọdụ ngagharị nke ebe mgbago elu na ọnọdụ nke nchịkọta yinye. Nchekwa akpaka na -akwalite nkasi obi nke ọrụ yana nchekwa nke ụgbọ ala niile.
Nke gara aga: Ebuli akpa
Osote: Akụkụ ebuli kreenu
Trailer Side Loader
Akụkụ ebuli kreenu